Nhau - Chinese spherical popcorn yakaendeswa kunze kweJapan muhuwandu kekutanga
Popcorn Caramel Kunaka
Popcorn Imwe Flavour
Chinese spherical popcorn yakaendeswa kunze kweJapan muhuwandu kekutanga
Musi waKurume 24, 2021, iyo yekuvhura mhemberero yekutanga popcorn kutumira kunze kwe Hebie CiCi Kambani kuJapan yakaitirwa muJinzhou Fekitori. Vakuru vemakanzuru nemadhipatimendi akakodzera vakapinda musangano wekuenda. Iyo popcorn kutumira kunze zvakare iri yekutanga batch yeChina's idenderedzwa popcorn zvigadzirwa zvinotumirwa kuJapan
China Jinzhou kuenda kuTokyo, Japan, yekutanga batch yemaputi inotumirwa kunze kuJapan, kutanga kwepamutemo! "Nechirevo chekubva nekusaruta kwepfuti, marori emidziyo akatakura zvigadzirwa zvemaputi ari munzira yavo kuenda kuTianjin tsika, uko kwaachaendeswa. kuenda kuJapan negungwa.
Japan inozivikanwa nekuve neayo mamwe emhando dzakaomesesa dzekudya munyika. Zvigadzirwa zvepopcorn zvinotumirwa kuJapan, zvinoenderana neGeneral Administration yeCustomer Supervision, Inspection uye Quarantine (AQSIQ) uye CNCA yakatanga kuburitswa kwemabhizinesi ezvekudya zvekutengesa epamba nekumhiri kwemakungwa "matatu akafanana chirongwa". , iwo iwo mhando) zvinodiwa zvekumhara zvakakwana.
Hunhu hwezvigadzirwa zvinotengeswa mumusika weChinese zvakangofanana neizvo zvezvigadzirwa zvakatengwa nevatengi muJapan, izvo zvakare zvinoratidza kuti zvigadzirwa zvemapopu zveHebei cici co., Ltd zvakave zvichizivikanwa pasirese simba rechiratidzo nechero rakasarudzika makomborero uye yakanakisa chigadzirwa mhando
Hebei CICI co., Ltd. popcorn kambani yakasarudzika sarudzo yezvinhu, kusarudzwa kwezvakagadzirwa, ndiyo piyona wemapopcorn akabikwa. Nekuda kwekuona kuwedzera uye kuzara kwepopcorn, yakasikwa inotapira, kambani yedu yakagadzira yakasarudzika yemaminetsi gumi nemasere ekubheka tekinoroji (uye yakazivisa patent yenyika), kuitira kuti popcorn irambe ichingori, shuga zvakaenzana kupinda, crisp, inozorodza, hwema, gadzira popcorn mhando kuravira kubva pane zvakajairwa
MR.Guo sachigaro weHebei CiCi co., Ltd Kambani, yakati kambani yedu yakanyorera kunyoresa chiratidzo cheMadrid chepasirese kuperekedza kutumira kwezvinhu. Uku kutumira kunze kweJapan chiitiko chakakosha mukugadzirwa kwezvigadzirwa zvemapopu, uye zvakare kutanga kwakakosha kuenda kunze kwenyika. Mushure mekubudirira kutumira kunze kuJapan, kambani ichaenderera kuvhura musika wakakura wepasi rose, ramba uchiwedzera nharaunda, kusimudzira kukwidziridzwa kwemhando yepamusoro kwekutengeserana kwekunze, rega zvigadzirwa zvepopcorn pasi!
Post nguva: Kubvumbi-06-2021
33 Gongye Road, Jinzhou guta, Hebei dunhu, 052260, China
Runhare: 0086 - (0) 311-8511 8880/8881
Ziva zvakawanda nezve Chinese mhando INDIAM popcorn
Iko mhando yekubatana kweINDIAM popcorn uye ...
Chinese idenderedzwa popcorn yakaendeswa kune ...
Zvibereko zvitsva zvinoburitsa popcorn
Caramel popcorn, popcorn, INDIAM popcorn, China Yakagadzirirwa Classroom,